Qalalaasaha Libya: “Ciidanka Soomaaliya Ma Ahan Calooshooda U Shaqeystayaal Libya u socda” | Gaaroodi News
Qalalaasaha Libya: “Ciidanka Soomaaliya Ma Ahan Calooshooda U Shaqeystayaal Libya u socda”
Waxaa dhowaanahan la isla dhexmarayay in Soomaaliya ay ciidamo u direyso dalka Libya si ay u “caawiyaan” kuwa Turkiga.
Xaaladda Libya ayaa sii xumaaneysa iyadoo dowladdo awood leh ay ku dul loolamayaan – waxaana ugu dambeeya Turkiga iyo Masar.
Turkiga wuxuu taageereyaa maamulka Qaramada Midoobey ay aqoonsan tahay ee ku sugan caasimadda Tripoli, halka Masar iyo dowlado kale ay taageerayaan Janaraalka laga adkaaday ee Khalifa Xaftar.
Baarlamaanka Masar ayaa sidoo kale, shalay isku raacay in militariga dalkooda ay gudaha u gali karaan Libya, iyagoo taageeraya qabiillada deggan xuduudda dhanka Libya.
Dowlado ay ka mid tahay Aljeeriya ayaa ka digaya dhibaatada ka dhalan karto in hub la siiyo qabiillo iska soo horjeeda – taas oo uu sheegay in ay abuuri karto “Soomaaliya cusub”.
Hadaba, waxaa jiray bogag internet ah oo lagu qoray in Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay ciidamo u direyso Libya “kuwaas oo gacan ka geysanaya xasilinta dalkaas”. Wasiirka Arrimaha diabdda ee Soomaaliya, Axmed Ciisa Cawad
Wasiirka Arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciisa Cawad, ayaa beeniyay in arrintaas ay jirto wuxuuna yiri: “ma jiraan ciidan aan u direyno Libya”.
“Ciidamada Soomaaliya ma ahan calooshood u shaqeystayaal, sida ciidamada kale ee la sheeg-sheegayay. Marka anaga ma haysano calooshood u shaqeystaal”, ayuu yiri wasiirka.
Wuxuu intaa ku daray: “Wararka meelaha lagu qorayo ee dacaayadaha ah waxba kama jiraan”. Turkiga ayaa saldhig ciidan oo wayn ku leh Muqdisho halkaas oo lagu tababaro ciidanka xoogga Soomaaliya.
Wuxuu Wasiir Cawad beeninayay hadal ahaa in “Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay ka wadahadlayaan sidii ay ciidamo wada jira ugu diri lahaayeen Libya”.
Dhanka kale, waxaa jiro madax ka digeysa in Libya “ay u burburto sida Soomaaliya”, ayna colaad xun ka dhacdo.
“Hubeynta qabiillada Libya waxay sababeysaa Soomaaliya cusub”
Madaxweynaha Aljeeriya, Cabdelmajid Tebboune, ayaa sheegay inuu ka xun yahay in “la hubeeyo qabiillada Libya”, sida ay qorayaan qaar ka mid ah warbaahinta Carabta.
Wuxuu madaxweynaha sheegay in “arrintaas ay sii xumeyn doonto xaaladda Libya ayna abuuri doonto mid la mid ah dhibaatada Soomaaliya”, sida lagu qoray warbaahinta Middle East Monitor. Madaxweynaha Aljeeriya, Cabdelmajid Tebbuune.
Boukadoum wuxuu sheegay in Aljeeriya ay fileyso “in sida ugu dhaqsaha badan loo soo celiyo xasilloonida Libya iyadoo shacabka Libya ay u madaxbannaan yihiin go’aankooda”.
Turkiga iyo Masar maku dagaallami karaan Libya?
Maamulka dalkaas waxay sheegayaan “in furaha nabadda ee Libya aysan ahayn Saliidda iyo Shidaalka iyo faragelinta arrimaha gudaha ee dalkaas lagu hayo iyo xaaladda ay wajahayaan shacabka. Sharciyadda dowladnimo ee Libya – baarlamaanka iyo maamulka guud – oo eegaya danaha dalka, waa furaha dhabta ah ee maamulidda waddanka iyo ilaalinta badqabka shacabka”. Sisi ayaa booqasho ku tagay saldhigga ciidamada cirka ee Masar ee ku dhow xadka Libya
“In faragelin dibadda ah lagu sameeyo Libya ma ahan arrin sharci ah, sababtoo ah waxay noqon kartaa dagaal cusub oo sii xumeeya dhibaatada hadda taagan, burburna u geysta dalka. Waxay taas fursad u noqoneysaa in baabi’in dibadda ka timid iyo boob loogeysto shacabka Libya oo haddaba uu qasaare soo gaaray, kana barakacay guryahooda,” ayuu yiri Al-Hamuuri.
Wargeyska Al-Quds Al-Carabi wuxuu dhankiisa qoray: “Ka dib markii Aqila Saleh, madaxa baarlamaanka Tobruk, uu soo saaray qoraal uu ciidamada Masar kaga dalbaday in faragelin ay ku soo sameeyaan dalkiisa; waxay warbaahinta Masar sheegeen in wafdi ka socday Bengazi ay gaareen Qaahira”.
“Wafdigaas oo ka koobnaa Golaha Culimada iyo qabaa’illada qaar ee Libya ayaa la kulmay madaxweynaha Masar Cabdifitax Al-Sisi.”
Wargeyskaas ayaa lagu xusay in “haddii qoraalka kore ujeedadiisu yahay in Masar kaalin sharci ah laga siiyo Libya, haddaba golahaas waxaa ka hartay 35 xubnood oo keli ah, go’aankiisana ma noqonayo mid sharci ah oo loo dhan yahay”.
Waxaa jiray xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya qabaa’illada carabta ah ee deggan labada dhinac ee xuduudda ee Libya iyo Masar. Balse dad badan waxay shaki gelinayaan kaalinta Masar ee qabaa’illada kula heshiinayso “si ciidankeeda u galaan gudaha Libya”.
“Inkastoo aysan jirin sharciyad uu haysto Aqalka Wakiillada ee Tobruk, haddana waxay u taagan yihiin ‘mataladda casriga ah ee Libya’, haddana madaxdooda waxay kuraasta u haystaan keliya in si dimuquraadi ah lagu doortay, balse ma ogolaan karaan in faragelin shishiiye ay sharci ka dhigaan”, sida uu qoray wargeyska Al-Qudus Al-Carabi.
Akram Al-Qassas oo ka tirsan wargeyska, Al-Yowm Al-Sabiya ee Masar ka soo baxa, ayaa sheegay in “Masar ay horey u xaqiijisay in aysan ogolayn in faragelin iyo duullaan shishiiye lagu qaado Libya iyo maamulkeeda, dhaqaaleheeda iyo shacabka Libya intuba, balse danaha maleeshiyaadkii ay taageereysay oo meesha ka baxaya iyo faragelinta tooska ah ee Turkiga ayaa wax ka badalaya qariidadda awoodda iyo dhaqaalaha kuwaas oo sababay sii kala fogaansho”. Ciidamada Turkiga ayaa caawinaya dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee Libya
Xaaladda Libya waxay hadda gacanta u gashay Turkiga iyo Masar oo loolamaya – labada dal waxay kala noqdeen kuwa “go’aannada u kala gaara Bariga iyo Galbeedka,” ayuu yiri Cubayd Al-Raqiq oo ah saxafi u dhashay Libya.
Wuxuu intaa ku daray: “Waxaan filayaa inuusan jiri doonin isku dhac militari oo laba dhinac – Turkiga iyo Masar – ku dhexmara Sirte iyo Al-Jafra, balse warbaahinta ayaa sii buunbiinineysa iyagoo doonaya in ay eegaan aragtida shacabka Libya iyo haddii ay aqbali karaan waxa ay u qorsheeyeen dad kale oo ajaaniib ah oo faragelinaya arrimaha Libya”.
Wuxuu tilmaamay inuu aaminsan yahay in “Ruushka, Mareykanka iyo dalal kale ay isku raaceen hadda in Sirte ay tahay magaalo dhexdhexaad ah oo ciidamada labada dhinac aysan gacanta ku haynin iyo in Xaftar uu aqbalayo inuu ka fogaado magaaladaas isagoo ku badalanaya in la ogolaado in ciidankiisa ay ku sii sugnaadaan saldhigga ciidamada cirka ee Al-Jafra.”
Sidoo kale Xaftar wuxuu doonayaa in dib loo billaabo dhoofinta Shidaalka iyo in goobaha laga soo saaro ay ilaaliyaan askartiisa, sida uu qabo saxafigan u dhashay Libya.